Sports Ministry - Part 21
राखेप सदस्यसचिवको सपथ लिए सिलवालले, केहीबेरमा पदबहाली गर्ने
काठमाडौं, २३ असार । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका रमेश कुमार सिलवालले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वर्माले सिलवाललाई आजैदेखि लागू हुने गरि सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेका हुन्…
एसियाडमा नेपाललाई रजत पदक दिलाउने प्याराग्लाइडिङका भट्टराई उत्कृष्ट प्रशिक्षक
काठमाडौं, १७ असार । नेपाललाई एसियाडमा २० वर्ष पछि रजत पदक दिलाउने मुख्य प्रशिक्षक योगेश भट्टराईले उत्कृष्ट प्रशिक्षकको अवार्ड जितेका छन् । उनले फुटबलका हरि खड्का, एथ्लेटिक्सका धनीराम चौधरी, क्रिकेटका जगत टमाटा र भलिबलका ज्ञानेन्द्र विष्टलाई…
काठमाडौं, ९ असार । नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपको कार्यकारी पद सदस्य सचिव केशब कुमार विष्टको चार वर्षे कार्यकाल सोमबार सकिदैं छ । २०७२ असार ९ गते सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका विष्टले चार वर्षे कार्यकाल सफल भएको…
संसदमा खेलकुद मन्त्रीकाे जवाफ, ‘खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ’
युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलमा खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभएको छ । विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको विषयमा उठेका…
स‌ंसदमा सांसदकाे प्रश्न खेल विकासका कार्यक्रम खै ?
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफल आजदेखि शुरु भएको छ । उक्त विधेयक अन्र्तगत आजको बैठकमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल प्रारम्भ भएको हो । बैठकमा भाग लिँदै सांसद प्रदीप यादवले प्रादेशिक…
काठमाडौं, २८ जेठ । संघीय संसदमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमाथिको छलफल शुरु भएको छ । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज भुषालले नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट विनियोजन गर्दा युवा तथा खेलकूदमन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९९…
मुक्तिबाबु रेग्मी, काठमाडाै‌ं | प्रदेश ५ मा भएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका पदकधारी खेलाडीले प्रतियोगिता सकिएको दुई महिना वित्दा पनि अझैं पुरस्कार पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश ५ का नेपालगञ्ज र दाङ लगायतका स्थानमा भएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको कुल…
सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान बनाएका गोपाल श्रेष्ठलाई आज पोखरामा स्वागत एवं अभिनन्दन गरिएको छ । पूर्वराष्ट्रिय फुटबल खेलाडी तथा एचआइभीबाट सङ्क्रमित भएर सर्वोच्च शिखरमा पुग्ने व्यक्ति भएका कारण श्रेष्ठले विश्व कीर्तिमान बनाएका…
काठमाडौं, १७ जेठ । देश संघीय संरचनामा गएपछि अहिले खेलकूदको पनि संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको छ । आठौं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता परिवर्तित संरचना अनुसारनै सम्पन्न भएको थियो । प्रदेश स्तरिय संरचना खेलकूदमा लागू भए पनि खेलकूदकै…